Obi nkoropụ nke ire ahịa na tolọ Ahịa | Martech Zone
Nkpasu iwe nke ire ahia na ndi ahia
Friday, July 17, 2015 Tọzdee, Nọvemba 5, 2015 Douglas Karr
Rụ ọrụ na ụlọ ọrụ teknụzụ ahịa na-enye anyị ohere iji rụọ ọrụ na ọtụtụ otu - site na nnukwu ụlọ ọrụ ndị na-ahụ nnukwu foto ma na-arụ ọrụ iji dozie echiche nke akara ha ruo ọtụtụ afọ - na nzukọ na-eche ihe kpatara ekwentị ha adịghị. na-agbanye otu ọnwa na ntinye ego ha.
Ihe atụ m jirila oge ụfọdụ na-azụ ahịa bụ ịkụ azụ. Ọ bụrụ na ị bụ nzukọ na-ere ahịa, ị ga-achọ ịpụ na mmiri wee tụfuo agụụ. Otutu mkpanaka i nwere na ngwa ngwa i nwere ike inweta ha nile n’ime mmiri, o bu n’uhe ka ihe kariri. Nsogbu bụ na azụ ahụ nwere ike ọ gaghị anọ ebe ụgbọ gị nọ, ọ nwere ike ọ gaghị amasị ụrà a ị na-eji, yana dịka ị na - arụpụta ihe - ị nwere ike ịbịa ụlọ aka aka.
Ire ahia bụ usoro nnwale, mmejọ na ọkụ ọkụ. Ọrụ nke marketer bụ ịmụ ebe azụ nwere ike ịbụ, ihe nri kachasị mma bụ, na ịkọ mmiri iji weta nnukwu azụ ma ọ bụrụ na ha anọghị ebe ahụ. Usoro a nwere ike bụrụ ezigbo ihe iwe nye ụlọ ọrụ na-ekwenye n'ụzọ ọ bụla ị ga-esi nweta ahịa karịa bụ ịkpọkwu oku.
Iji mee ka o doo anya, anaghị m akụ aka arụpụtaghị ihe na ire ahịa. Inwe oke ahia mmadu si na mmiri achu mmiri n’oge, ya na ngwa ndi kwesiri ya, n’ime mmiri kwesiri, ya na nri nri azu… bu nke zuru oke. Ọ bụ naanị na ịbịaru ebe ahụ na-ewe oge.
Ọ bụrụ na ị bụ ezigbo onye ọkụ azụ ma ị gaa ebe ị na-akụbeghị mbụ, ihe mbụ ị ga - eme bụ ịchọta onye ndu. Ọbụna onye ọkụ azụ kachasị mma mara nke ahụ, ọ bụrụ na ha chọrọ inwe ihe ịga nke ọma, ịchọta ezigbo onye ndu ga-enye ha ohere kachasị mma ịdabata azụ ha mechara. Nnukwu ndị ahịa na-amata nke a. Ndị ọmarịcha ahịa na-amasị iso ndị ahịa na-arụ ọrụ iji mee ka ha mata ihe nri idide na-arụ ọrụ, ihe na-adịghị, yana nnukwu azụ na-atarịta ibe ha arụ.
Ire ahia bu ihe a na-adighi anya nye ndi ahia ahia nke na-emebeghi ya. Ha mara mgbe ọ na-efu, mana ha enweghị ike ịchọpụta etu ha ga-esi gbue ọnụego ahụ n'ihi na ọ naghị adaba na mpempe akwụkwọ ka ọ na-adị ma ọ bụrụ na emechi ya. Ọ bụ ezie na anyị ji obi eziokwu na-anwa izere iso ndị otu na-ere ahịa na-arụ ọrụ, mgbe ha na-akwagide anyị n'ezie, ọ dị oke mkpa na anyị ga-enye nnukwu nkwukọrịta na ịkọ akụkọ na ndị ndu na-eduga ha nwere ike ijikọ ntụpọ ahụ.
Ikeji olu - ọtụtụ oge na ụlọ ọrụ ndị ahịa na-ere ahịa maara na ha chọrọ ahịa bụ mgbe ndị na-ege ntị na-ekwu okwu mgbe niile banyere onye na-asọmpi ha na ọ bụghị ọtụtụ nkata banyere akara, ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ nke aka ha. Itinye n'ọrụ a nlekota oru ngwá ọrụ maka kwuru na ezi akụkọ nwere ike inye akụkọ na-egosi ọhụrụ olu nke mkpọtụ gbasara ụlọ ọrụ gị na ndị asọmpi gị. Ọ ga - emekwa ka ụda ahụ baa uru ma gosi ụdị mbọ mbọ ndị asọmpi gị na - agba mgba ga - eme.
Kwado Ahịa ihe - anyị na ndị ahịa na-ere ahịa na-arụ ọrụ ebe anyị rụrụ ọrụ na nhazi ha na mbụ, wee mepụta ụfọdụ akara ngosi mara mma maka ndị ahịa ha. Nsogbu bụ na ha etinyeghị ndị otu ahụ n'ezie na mkparịta ụka ahụ… ya mere ọnwa ole na ole ka e mesịrị, anyị debanyere aha maka ngosi ma hụ onwe anyị ka anyị na-elele ikike nke ndị na-ere ahịa nke a na-eji tupu ọrụ anyị. The ika na-adịghị etinye n'ọnọdụ kwesịrị ekwesị, ndịna-emeputa na Akara ókwú mere ha ka a ụlọ akwụkwọ sekọndrị oru ngo, na ahịa na-aga n'ihu ha ojuju. Ọ gwụla ma ndị ahịa gị ga - azụta, gụrụ akwụkwọ na ọnọdụ gị, ma jiri ya rụọ ọrụ azụmaahịa gị n'ahịa ahịa investment ịre ahịa azụmaahịa gị na-emegide usoro ahịa gị.
Ahịa na ọkwa - ọ bụ m chere na Google algorithms bụ ndị kachasị ọkaibe n'ụwa na nhazi ọkwa ikike yana isiokwu onye ọrụ na-achọ. Nye ọkwa chọrọ oge na-aga n'ihu n'oge na-adịbeghị anya, na-adịkarị ma dị mkpa nke a na-ekekọrịta n'ịntanetị. Ọ bụrụ n’ị naghị ewepụta nnukwu ọdịnaya, ọ gaghị ekekọrịta. Ọ bụrụ n ’anaghị ekekọrịta, ọ baghị ọkwa.
Omume ndị ọbịa - mgbe anyị na ụlọ ọrụ ndị ahịa na-ere ahịa na-arụ ọrụ, mmepụta ọdịnaya anyị na elekwasị anya na-agbanwekarị site na egbe egbe na otu nchịkọta. Nke ahụ pụtara na ọnụ ọgụgụ nke ndị ọbịa nwere ike ibelata na saịtị ahụ, mana ndị ọbịa ahụ dị mkpa na-abawanye. Anyị ga-elele peeji nke kwa nleta, ọnụọgụ ụzọ ọpụpụ na peeji nke ọdịda, yana ole ndenye aha na ndebanye aha na-eme.
Atụmanya Demographics na Firmographics - Ndi ahia na-agbanwe onu ogugu mmadu (B2C) ma obu ndi oru ahia (B2B) nke ndu nke ahia gi na-adọta? Ọ na-agbanwe oge? Ọ bụrụ na ndị ahịa gị nwere ezigbo ndị ahịa, ịkwesịrị inwe ike ịkọwapụta na ndu ndị ị na-enweta na-achọ ịbịaru nso na ezigbo onye ahịa ha na-achọ.
Ahịa ahịa - Kwụsị itinye njiri ikpeazụ ahụ na ire ma bido gosipụta mbọ mbọ azụmaahịa metụrụ atụmanya ọ bụla. Inwe ike inyocha ihe nyocha ahụ ha batara, ma ọ bụ ibe ha chọtara na ọchụchọ, ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ ọcha ha budatara, ma ọ bụ ndebanye aha ha zara ga-enyere gị aka ịghọta nke ọma etu mbọ mbọ azụmaahịa gị siri metụta ọrịre ahụ. Otu ndị ahịa dị ukwuu na ekwentị ga-emechi ọtụtụ azụmaahịa, mana nnukwu ndị otu ahịa na-akpọ atụmanya nke usoro mmụta azụmaahịa gị ga-eme nke ọma.
Ikwuputa ihe ndia na-eduga na-egosi n'ụzọ dị irè ga-enyere aka itinye ahịa na-ere ahịa n'udo. Ọ bụ ezie na ha ka ga-ewe iwe na ekwentị ha anaghị akụ site na ahịa mumbo-jumbo a ị na-eme… opekata mpe ha ga-ahụ ọkụ ị na-ewepụta. Na itinye usoro nke atụmanya maka ọdịnihu kwesịrị ime ka ha nwee nchekwube na - ọ bụghị naanị ahịa nwere ike inyere ndị ahịa ha aka imechi ọtụtụ azụmahịa - ha ga-amata na o nyeere ha aka imekwu azụmahịa na nnukwu azụmahịa na obere mbọ.
Ahịa ga-arụ ọrụ ogologo oge mgbe itinye ego. Anyị ka nwere akwụkwọ akụkọ ọcha anyị mepụtara maka ndị ahịa 4 afọ gara aga nke na-aga n'ihu ịre ahịa maka ọtụtụ ụlọ ọrụ. Nke a dị mkpa icheta. Ọ bụrụ na ịkwụsị ịkwụ onye na-ere ahịa gị echi, ekwentị ga-akụ. Ọ bụrụ na ịkwụsị ịkwụsị itinye aka na ire ahịa, ị ga-aga n'ihu na-enweta uru ya n'agbanyeghị na ha ga-ajụ oge. Inye ego gị kachasị mma bụ ma - ma na-etinye usoro ịzụ ahịa na-agbanwe agbanwe oge niile iji bulie ike ma na-aga n'ihu na-akwụ ụgwọ ụgwọ gị ọ bụla, na-akwụ ụgwọ ọ bụla, na-eme ka njigide, mụbaa okwu ọnụ, ma na-eto ahịa.
Tags: Attributionna-eduga na-egosiogoọrịre ọrịre ahịaihe ahiaire ahia na ire ahiaòkè nke olummekọrịta mmadụna-akwado ahịa
Kedu ihe bụ SMS? Ederede ederede na nkọwapụta Ahịa Ekwentị
Ebumnuche 5 Ndị ahịa gị na-eruteghị oke ha